Toenail फg्गस को लागी १ home घरेलु उपचार - स्वास्थ्य शिक्षा | सेप्टेम्बर 2021
स्वास्थ्य शिक्षा, घरपालुवा जनावर स्वास्थ्य शिक्षा खेलहरु समुदाय मनोरञ्जन समुदाय, कल्याण कम्पनी, समाचार औषधि जानकारी, स्वास्थ्य शिक्षा भारी खेल कम्पनी, स्वास्थ्य शिक्षा औषधि जानकारी, समाचार समाचार समाचार, कल्याण प्रेस कल्याण
मुख्य >> स्वास्थ्य शिक्षा >> Toenail फg्गस को लागी १ home घरेलु उपचार
जोखिम कारक | निदान | घरेलु उपचार | ओभर-द-काउन्टर औषधि | प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स | जब डाक्टरलाई भेट्ने
टोएनल फg्गस, जसलाई ओन्कोमाकोसिस वा टिनेआ उन्गुइम पनि भनिन्छ, एउटा साधारण नेल अवस्था हो जसले संयुक्त राज्यका लाखौं मानिसहरूलाई असर गर्छ। फ Fun्गल नेल संक्रमण विभिन्न जीवहरू जस्तै मोल्डहरू, खमीरहरू, र फgi्गलबाट नेलमा विकसित हुन सक्छ। सामान्यतया यी जीवहरूले क्र्याक नेल वा नेलको वरपरको छालाको सम्पर्कमा आएपछि उद्भव हुन्छ किनभने उद्घाटनले यी जीवहरूको लागि प्रवेश पोर्टल प्रदान गर्दछ।
जब तपाईंको खुट्टाहरू पसिना आउँछ वा ओसिलो वा ओसिलो नै रहन्छ भने, तपाईंको खुट्टाको औंलाहरूमा फg्गलस बढ्ने अवसर बढ्छ। न्यानो, चिसो वातावरण जस्तै बारम्बार जोखिमले स्विमिंग पूलहरू, लकर कोठाहरू, वा पनि आर्द्र मौसममा बाँचिरहेको हुनाले तपाईंलाई यी प्रकारका संक्रमणहरूको जोखिम बढी हुन्छ। यस कारणले गर्दा यी संक्रमणहरू गर्मी महिनाहरूमा अधिक प्रचलित देखिन्छ।
पुरुषहरू यस किसिमको संक्रमणलाई महिलाहरू भन्दा कम कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली भएका व्यक्तिहरू भन्दा बढी विकास गर्नका लागि चिनिन्छन् - मधुमेह, कमजोर सर्कुलेशन, र वयस्कहरू वयस्कहरू। व्यक्तिहरू जसले बारम्बार नेल सलुनहरू पनि गर्दछन् र आफैलाई उनीहरूको खुट्टामा फgal्गल संक्रमणको विकास र फैलाउने जोखिममा राख्न सक्छन्। खुट्टाको संक्रमणको प्रमाणमा नेलको रंग परिवर्तन हुन्छ जुन सेतो, पहेलो, खैरो, वा कालो हुन सक्छ। नेल गाढा हुन सक्छ यसले तपाईंलाई नेलको आफ्नै हेरचाह गर्न गाह्रो बनाउँदै। पूरै गन्ध, भंगुरता, वा नेलको ओछ्यानबाट नेलको पूर्ण पृथक्करण पनि हुन सक्छ।
Toenail फg्गरस पुष्टि गर्नको लागि, तपाईंको डाक्टरले पहिले तपाईंको खुट्टाको मुल्या evalu्कन गर्नेछ। उनीहरूले संस्कृति गर्ने निर्णय पनि गर्न सक्छन् जहाँ नेल वा छालाको नमूना प्रयोगशालामा थप मूल्या evalu्कनका लागि लिन सकिन्छ। किनकि त्यहाँ न n परिवर्तनहरूका अन्य कारणहरू पनि छन् (सोरायसिस, माइक्रोट्रामा, खराब पोषण, नेल पोलिशबाट दाग धब्बाहरू), यो सबैभन्दा उपयुक्त उपचार छान्नको लागि महत्त्वपूर्ण कदम हो।
विभिन्न प्रकारको toenail फg्गस को लागी उपचार विकल्प औषधि रहित वैकल्पिकहरू, ओभर-द-काउन्टर औषधि, प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स, लेजर उपचार, वा शल्य चिकित्सा हटाउने जस्ता ती गम्भीर मामिलाहरूको लागि उपलब्ध छन्। धेरै व्यक्तिहरूले औषधी किन्न वा उनीहरूको डाक्टरको अफिसमा जानु अघि उनीहरूको घरको चारै तिरको चीजहरू सुरू हुन्छन्। यी उपचारहरू हल्का अवस्थामा अधिक प्रभावकारी हुन्छन्।
Toenail फg्गसका लागि यी केहि प्रभावकारी घरेलु उपचारहरू प्रयोग गरेर हेर्नुहोस्:
मोजा र जुत्ता सफा गर्नुहोस्
जैतुन पात निकासी
१. साप्ताहिक मर्मत
पहिले, हप्तामा एकचोटि तिनीहरूलाई ट्रिम गरेर र फाइल गरेर उपचारका लागि तपाईंको न yourहरू तयार गर्नुहोस्। खुट्टाको नen्ग ​​काट्नेले नमा दबाब कम गर्छ र एन्टिफंगल स solutions्ख्याले नailमा प्रवेश गर्न मद्दत गर्दछ। परम्परागत toenail क्लिपरहरू र एक Emory बोर्ड प्रयोग गर्नुहोस् न nails छोटो र पातलो राख्न। प्रत्येक प्रयोग पछि भाँडाको कीटाणुरहित गर्न निश्चित गर्नुहोस्। छाँटकाँट, सफा, र सुख्खा नाखाहरू कायम राख्नको लागि दाँतको स treat्कलनको उपचार गर्न र भविष्यमा यसको रोकथाम गर्न आवश्यक हुनेछ।
२. मोजा र जुत्ता सफा गर्नुहोस्
नियमित रूपमा तपाइँको जुत्ता र जुत्ता परिवर्तन गर्दा पनि नचाहिने खुट्टाको फg्गसको बृद्धि गर्न सकिन्छ। दुबै मोजा र एथलेटिक जुत्ताहरू तातो पानीमा धोउन सकिन्छ कपडामा बढिरहेको खमीर र फgi्गीको विकासबाट मुक्त गर्न। केहि जुत्ता मेसिन सुकाउन सकिन्छ। जूता सफा गर्ने बेला घाममा सुकाउने अर्को विकल्प हो।
बेकिंग सोडाको आधा कप वा वाशिंग मेशिनमा एक कप सिरका राख्नुले मोजा वा जुत्ताहरूमा ब्याक्टेरिया वा फg्गस हटाउन मद्दत गर्दछ।
बुटाहरू र अन्य फुटवियरहरू जुन मेसिन धुने मिल्दैन, एउटा सिरका र पानी समाधानसँग मिल्छ वा ओभर-द-काउन्टर (ओटीसी) एन्टिफंगल स्प्रेले स्प्रे गरिन्छ। मेडिकेटेड पाउडरहरू पनि खुट्टाको फg्गसका लागि जुत्ताहरूको उपचार गर्न मद्दत पुर्‍याउँछ।
सम्भव भएमा खुट्टा र जुत्ता लगाएर सास फेर्न अनुमति दिनाले फgal्गाल बृद्धि हुन सक्छ। सास फेर्नेस जुत्ता र सफा मोजा लगाएर आफ्ना खुट्टाहरूलाई जोगाउनुहोस्। एन्टिमाइक्रोबियल मोजा र बाँस, तामा, वा विशेष कपडाबाट बनेका जुत्ताहरू पनि उपलब्ध छन्। यसले तपाइँको फुटवेयरमा बढ्नबाट अनावश्यक ब्याक्टेरियाहरू र खमीर कम गर्न मद्दत गर्दछ।
तपाईंको खुट्टा सफा र सुक्खा राख्न एक सक्रिय दृष्टिकोण toenail फg्गस को प्रसार रोक्न सक्छ। तपाईं नुहाउन वा नुहाउन सक्नुहुन्छ नुहाउने साबुन पानी वा खुट्टा स्नान दैनिक घरका चीजहरूको प्रयोग गरेर। आफ्नो खुट्टा सबै प्राकृतिक, होमियोपाथिक कन्सोकसनमा भिजाउनु भनेको toenail फg्गसलाई कम गर्न वा हटाउनमा लाभदायक हुन सक्छ।
हाईड्रोजन पेरोक्साईड औंलाहरू मा हुर्कने फ fun्गस मार्न सक्छ। तपाईं आफ्नो संक्रमित औंलाहरूमा वा सफा कपडा वा कपासको झागको साथ खुट्टामा सिधा हाइड्रोजन पेरोक्साइड मेटाउन सक्नुहुन्छ। हाइड्रोजन पेरोक्साइड एक खुट्टा साबुन मा पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ। Hydro कप हाइड्रोजन पेरोक्साइड (वा धेरै क्याप्पुल्स) चार कप कप चिसो पानीमा मिसाउनुहोस् र १० देखि २० मिनेटसम्म खुट्टा भिजाउनुहोस्। तातो पानी र सुख्खा संग प्याट कुल्ला।
Black. कालो चिया
प्लेन चियामा खुट्टा भिजाउनु पनि toenail वा खुट्टाको फg्गस उपचारको लागि लाभदायक हुन सक्छ। कालो चियामा टानिक एसिड हुन्छ जसले खुट्टाहरू सुक्छ, ब्याक्टेरिया मार्दछ, र पसिना घटाउन खुट्टाको प्वालहरू बन्द गर्न मद्दत गर्दछ। दुई क्वाटर पानी उमाल्नुहोस् त्यसपछि पाँच देखि छ चिया झोलाहरू थप्नुहोस्। चियालाई चिसो हुन दिनुहोस् र feet० मिनेटको लागि खुट्टा भिजाउनुहोस्। यदि चाहानुहुन्छ भने यस खुट्टा दैनिक प्रयोग गर्नुहोस्।
Apple. एप्पल साइडर सिरका
Toenail फg्गसको उपचार गर्न अर्को घरेलु उपचारमा एप्पल साइडर सिरकाको प्रयोग समावेश छ। सिरका एन्टिफंगल घटक हो जुन पानीसँग मिसाउन सकिन्छ जुन खुट्टामा भिजाउन सकिन्छ। यो एसिटिक एसिड कम्पोनेन्टले रंगको औंलाहरूलाई सेतो पार्न र अन्य औंलाहरूमा संक्रमण फैलाउन रोक्न मद्दत गर्दछ। दुई भाग भिनेगर एक भाग तातो पानी प्रयास गर्नुहोस् र दैनिक 20 मिनेट को लागी खुट्टा भिजाउनुहोस्। अधिक शक्तिशाली खुट्टा भिजाउन को लागी, अनुपात एक भाग पानीमा एक भाग सिरका हुन सक्छ। यदि गन्ध धेरै भारी छ भने, आवश्यक तेल अधिक अनुभव लाई रमाईलो गर्न को लागी जोड्न सकिन्छ। सेतो सिरका एक वैकल्पिक रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ किनभने दुबै समान प्रभावकारी छन्।
पछाडि बेकिंग सोडा थप्नुहोस् प्रभावित नेललाई निको पार्नका लागि। तपाईं न्यूनतम पानीको साथ बेकिंग सोडाको पेस्ट पनि बनाउन सक्नुहुन्छ र यसलाई सिधा खुट्टामा लागू गर्न सक्नुहुन्छ। पेस्टलाई प्रभावित क्षेत्रमा १० देखि २० मिनेट बस्न दिनुहोस्, त्यसपछि तातो पानीले पखाल्नुहोस् र खुट्टा राम्ररी सुकाउनुहोस्।
बेकिंग सोडा खुट्टामा वा खुट्टा पाउडर जस्तो जुत्ताहरूमा पनि छिर्न सकिन्छ। एक पटक सुक्खा खुट्टामा लागू गरेपछि, सफा मोजामा लगाउनुहोस्; बेकिंग सोडाले ओसिलोपन हटाउन सक्दछ जबकि उपचार गुणहरू toenail फफस कम गर्न काम गर्दछ।
Ps. इप्सम नुन
एक मा खुट्टा भिजेको Epsom नुन (म्याग्नेशियम सल्फेट) नुहाउने आफ्नो खुट्टा को सg्कलन को लागी लाभदायक हुन सक्छ। तपाईं एक कप इप्सम नुनको दुई क्वार्ट तातो तातो पानीमा मिश्रण गर्न सक्नुहुनेछ र १० देखि २० मिनेटको लागि खुट्टा भिजाउनुहोस्। तपाईं थप विस्तृत Epsom नुनको कन्कोक्शन पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ जुन समावेश गर्दछ:
Cup कप न्यानो तातो पानी
कप Epsom नुन
सबै सामग्रीहरू मिक्स गर्नुहोस् र १ to देखि २० मिनेटको लागि खुट्टा भिजाउनुहोस्। आवश्यक तेलहरू खुट्टा नुहाउनुको लागि उत्कृष्ट थप हो। खुट्टाको फg्गासको उपचार गर्न उपचार गुणहरू सहितको आवश्यक तेलहरू तल सूचीबद्ध छन्। तपाईंको खुट्टा भिजाएपछि, तपाईंको खुट्टा सफा पानीले पखाल्नुहोस् र सफा टावलको साथ ड्राई प्याट गर्नुहोस्। सफा खुट्टा दूषित हुनबाट जोगिन, सफा मोजाहरू लगाउनुहोस् र सास फेर्न सक्ने जुत्ताहरू तपाईंको खुट्टाको नुहाउने क्रममा राख्नुहोस्।
Sen. आवश्यक तेल
अत्यावश्यक तेलहरू विभिन्न प्रकारका साधारण बिरामीहरूलाई निको पार्न होमियोपैथिक उपचारमा लोकप्रियता प्राप्त गर्दैछ। धेरै आवश्यक तेलमा प्राकृतिक जीवाणुरोधी र एन्टिफंगल गुणहरू छन्। Toenail फ that्गस कम गर्न मद्दत गर्न सक्ने केहि आवश्यक तेलहरू:
जंगली oregano तेल
मानुका रूखको तेल
छालामा लागू गर्नु अघि आवश्यक तेलहरू वाहक तेल, नरिवल तेल वा जैतूनको तेल जस्तै पातलो गर्नुहोस्। तपाईको मनपर्दो केरियर तेलको साथ चाहिएको तेल वा तेलको मिश्रण मिक्स गर्नुहोस् र प्रभावित नेलमा केही थोपा लागू गर्नुहोस्। पहिले नै उल्लेख गरिए अनुसार तपाई फुटबथहरूमा आवश्यक तेलको दुईदेखि तीन ड्रप थप्न सक्नुहुन्छ।
Oz। ओजोनटेड तेल
ओजोनिएटेड तेलहरू, जस्तै जैतुन र सूर्यमुखी तेलमा ओजोन ग्यास हुन्छ। विचार यो छ कि ओजोनले प्रभावित क्षेत्रहरूमा अक्सिजन प्रदान गर्दछ, जसले ब्याक्टेरियालाई मार्छ र छिटो उपचारको लागि छालाको कोशाहरूलाई उत्तेजित गर्दछ। एउटा अध्ययन पत्ता लगायो कि ओजोनेट तेल तेल toenail फg्कस को लागी एक प्रभावी घरेलु उपचार हो। अन्वेषकहरूले खमीरको १०१ नमूनाहरूमा ओजोनयुक्त सूर्यफूलको तेलको परीक्षण गरे। तेल धेरै फgal्गल तनाव विरुद्ध एक प्रभावी उपचार थियो। यो उपाय गर्न को लागी, पहिले आफ्नो खुट्टा सफा र सुक्नुहोस्। छालामा ओजोनटेड तेलको थोरै मात्रामा मालिश गर्नुहोस्, यसलाई प्रभावित न nailsहरूमा र सम्पूर्ण खुट्टाको वरिपरि काम गर्दै।
१० जैतुन पात निकाल्ने
जैतुन पात निकासीमा ओलिउरोपिन हुन्छ, जुन एक प्राकृतिक एन्टिफंगल र एन्टिमाइक्रोबियल हो। जैतुनको पातबाट बनेको सालभलाई दाँतको खुट्टामा संक्रमण कम गर्न प्रयोग गर्न सकिन्छ। तपाईं प्रतिरक्षा प्रणाली बढाउन र toenail फg्कस प्रणालीगत उपचार को लागी निकाल्ने युक्त क्याप्सूल निगल्न सक्नुहुन्छ। लगभग दुई जैतुन पात निकाल्ने क्याप्सूल एक विस्तारित अवधिको लागि दिनमा दुई पटक लिन सकिन्छ। जैतुन पत्ता निकाल्ने अघि तपाईंको स्वास्थ्य सेवा प्रदायकसँग परामर्श लिनुहोस्।
११. स्न्याकर्ट एक्स्ट्र्याक्ट
सूर्यमुखी परिवारमा बोटबिरुवाबाट बनाइएको स्न्याकरुट निकासी, एक सबै-प्राकृतिक एन्टिफंगल होमिओपैथिक उपचार पनि toenail फg्गस उपचार गर्न प्रयोग गरियो। सामान्यतया भारतमा आयुर्वेदिक अभ्यासहरूमा प्रयोग गरिएको, स्न्याकर्ट एक्स्ट्र्याक्ट प्रभावित टाउनेलमा सिधा लागू गर्न सकिन्छ। धेरै महिनामा दुई देखि तीन पटक निकाल्नुहोस्। तपाईको चिकित्सकलाई सोध्नुहोस् कि स्नकरुट एक्स्ट्र्याक्ट तपाईको प्रकारको खुट्टाको फg्गसका लागि सही छ।
जिंक अक्साइड एक खनिज हो जसले फंगल संक्रमणको उपचार गर्न सक्छ। छाला रक्षकको रूपमा, माइक्रोनाजोल-जिंक अक्साइडलाई स्प्रेयर वा प्रभावकारी ठाउँमा लागू गर्न सकिन्छ संक्रमणका लागि लड्न र खुट्टाको फg्कासको संकेत कम गर्न। तपाईंको खुट्टा हेरचाह रेजिमेन्टमा जिंक थप्नको लागि सही छ कि छैन भनेर तपाईंको डाक्टरसँग जाँच गर्नुहोस्।
कति समय को लागी योजना बी राम्रो छ
१ Gar. लसुन
लसुन एक हो शक्तिशाली एन्टिमाइक्रोबियल प्लान्ट । सामयिक उपचारको लागि, लसुनको लौंग काट्नुहोस् र the० मिनेट को लागी प्रभावित नेलहरूमा छोड्नुहोस्। कच्चा लसुन थोरै प्रयोग गर्नुहोस्, किनकि यसले रासायनिक जलेको परिणाम दिन्छ।
लसुन भएको हर्बल पूरकहरूको बारेमा फार्मासिष्टलाई सोध्नुहोस्। यी पूरकहरू मौखिक रूपमा लिन सकिन्छ छाला संक्रमण मात्र उपचार गर्न मात्र होइन उच्च रक्तचाप, हृदय रोग, केही क्यान्सर, र टिक काट्ने रोकथाम गर्न। लसुन सप्लीमेन्टहरू पेटको अल्सर, पाचन समस्या, वा रक्तस्राव विकारहरू भएको व्यक्तिले लिनु हुँदैन। यसले जन्म नियन्त्रण गोलिहरू पनि कम प्रभावकारी बनाउन सक्छ। मौखिक लसुन पूरक सेवन गर्नु अघि स्वास्थ्य सेवा पेशेवरसँग कुरा गर्नुहोस्।
१ Corn. कोर्नमेल
कर्नेलमा केहि एन्टिफंगल गुणहरू छन्। तपाईं कोर्नमेललाई पेस्ट वा साबुनको रूपमा प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। टाँस्नको लागि, कन्ममेललाई न्यानो पानीमा घिस्याउनुहोस्। तपाईंको खुट्टामा प्रयोग गर्नु अघि टाँस्नुहोस्। यो एक घण्टा को लागी बस्न दिनुहोस्। भिजुने रूपमा, एक इन्च ईन्च कर्नेललाई एक उथलो कन्टेनरमा थप्नुहोस्। कोर्नमीलको माथि एक इन्च न्यानो पानी खन्याउनुहोस्, एक घण्टाको लागि कोर्नमेल र पानी प्राकृतिक रूपमा मिसिएर। त्यसो भए, तपाईंको पूरै खुट्टा कभर गर्नको लागि पर्याप्त न्यानो पानी थप्नुहोस् र यसलाई एक घण्टाको लागि सोख्न दिनुहोस्। तपाईं toenail फg्गस को लागि साप्ताहिक घरेलु उपचार को रूप मा Cornmeal प्रयास गर्न सक्नुहुन्छ।
तपाईंको हालको खानाले फ fun्गसलाई पोषण दिन सक्छ क्यान्डिडा अतिवृद्धि। यहाँ केही आहार परिवर्तनहरू छन् जुन तपाईं खमीरलाई भोकले मार्न सक्नुहुन्छ र toenail फg्गल सुधार गर्न:
एक दिनको एक कपमा तपाइँको कार्बोहाइड्रेट सीमित गर्नुहोस्
नरिवल तेल संग कुक
अदुवा र लसुन समावेश गर्नुहोस्
सँग पूरक प्रोबायोटिक
नियमित व्यायामले उपचार प्रक्रियालाई तीव्र बनाउन सक्छ। रगत पनी छिटो शरीर मा पम्प गर्दा, यो प्राकृतिक भिटामिन र विषाक्त पदार्थ फ्लस जारी गर्दछ। अभ्यास गर्न निश्चित हुनुहोस् उचित स्वच्छता toenail फg्गस नराम्रो बनाउनबाट बच्न। मोजा लगाउनुहोला जसले बढी ओसिलोपना हटाउँदछ, एन्टिफंगल फिट पाउडर प्रयोग गर्नुहोस्, खुट्टामा सास फेर्न कसरतको लगत्तै जुत्ता हटाउनुहोस्, र नुहाउने कोठा वा पोखरीहरूमा फ्लिप-फ्लप वा स्यान्डल लगाउनुहोस्। एन्टिब्याक्टेरियल साबुनको साथ आफ्ना खुट्टा धुनुहोस् र तपाईंको स्नान पछि तपाईंको खुट्टा पूर्ण रूपमा सुक्नुहोस्।
Over-the-काउंटर toenail फg्गस उपचार विकल्प
जबकि घरेलु उपचारहरू तपाईंले toenail फg्गसको उपचारको लागि खोज्दै हुनुहुन्छ भन्ने उपचार हुन सक्छ, तिनीहरू खाद्य र औषधि प्रशासन (एफडीए) द्वारा विनियमित वा अनुमोदित छैनन्। ओभर-द-काउन्टर एन्टिफंगल क्रीम, स्प्रे र औषधी नेल पॉलिश उपलब्ध छन्। घरेलू उपचार प्राय: यी उत्पादनहरूको प्रभावकारिता बढाउन सक्छ।
Toenail फg्गस को उपचार को लागी एक अधिक लोकप्रिय over-the-काउन्टर उपचार को उपयोग गरीरहेको छ विक्स VapoRub । Mentholated साल्वहरू प्राकृतिक सामग्री मेन्थोल, मसलाको तेल, र कपूर समावेश गर्दछ। विक्स एक्लै प्रयोग गर्नुहोस् वा अन्य उपचार र औषधिहरूको साथ संयोजनको रूपमा। खुट्टा सफा गर्नुहोस् र दैनिक Vicks VapoRub को एक सानो राशि लागू गर्नुहोस्।
ओटीसी उत्पादनमा संक्रमित नेल भिजेको लिस्टरिन toenail फg्गस कम गर्न वा मार्न मद्दत गर्न सक्छ। सामान्यतया माउथवशको रूपमा प्रयोग, लिस्टरिन दिनको दुई चोटि २० मिनेट प्रभावित औंला वा toenail मा लागू गर्‍यो भने ओन्कोमायोसिसिसको स effectively्केतलाई प्रभावकारी कम गर्न सक्छ
एथलीटको खुट्टा औषधि
एथलीटको खुट्टा स्प्रेहरू, पाउडरहरू, र क्रिमहरू यसले दाँतद्वार वा वरपरको मांसपेशीमा विकसित हुनु अघि फ fun्गलको वृद्धि रोक्न मद्दत पुर्‍याउँछ। ब्रान्ड-नाम उत्पादनहरू जुन तपाईं प्रिस्क्रिप्शन बिना खरीद गर्न सक्नुहुनेछ टिनाक्टिन , माइकाटिन , लामिसिल स्प्रे , र लोट्रिमिन वायुसेना । तपाईंको स्थानीय औषधि पसलमा फार्मासिष्टलाई सोध्नुहोस् जुन तपाईंको लक्षणहरूको लागि उत्तम औषधि हो।
सम्बन्धित: एथलीटको खुट्टा उपचार र औषधिहरू
व्यायाम उच्च रक्तचाप संग मद्दत गर्दछ
Toenail फg्गरस औषधि औषधि
कहिलेकाँही औजारको संक्रमणको उपचार गर्न औषधीको आवश्यक पर्दछ जुन केवल केही महिनामा प्राकृतिक उपचार वा ओभर-द-काउन्टर औषधिको साथ जान सक्दैन। यस अवस्थामा, प्रिस्क्रिप्शन-शक्ति एन्टिफंगल औषधिले जिद्दी ओन्कोमायोसिससलाई उन्मूलन गर्न सक्छ।
सामयिक औषधिहरू अक्सर हल्का देखि मध्यम toenail फg्गस को उपचारमा प्रभावी हुन्छ। सामयिक समाधानहरूमा औषधी नेल पॉलिश वा तरल औषधि समावेश हुन सक्छ। लोप्रोक्स (ciclopirox), Penlac (ciclopirox), Kerydin (tavaborole), र जुबलिया (efinaconazole) toenail फg्गल को लागी शीर्ष नुस्खा ड्रगहरु हुन्।
मौखिक औषधीहरू क्याप्सुल, ट्याबलेट, वा तरल पदार्थमा आउन सक्छन्। केही सामान्य नुस्खेहरू हुन् डिफ्लुकन (फ्लुकोनाजोल), लामिसिल ( terbinafine ), ओन्मेल (itraconazole), र Sporanox (itraconazole)।
Toenail फg्गस औषधि को साइड इफेक्ट
होम्योपैथिक उपचार प्रयोग गरेर धेरै फाइदाहरूमध्ये एउटा हो त्यहाँ कम प्रतिकूल साइड इफेक्टहरू हुन्छन्। सामान्यतया toenail फ treat्गस को उपचार गर्न निर्धारित सामयिक उपचार सम्भवतः छाला जलाउन वा छाला गर्न सक्छन्। ओन्चोमाइकोसिसको उपचारका लागि मौखिक औषधिहरूले कलेजो वा जठरांत्र क्षति निम्त्याउँछ। तपाईंको औषधि सम्भावित साइड इफेक्टहरूको सूची पढ्न निश्चित गर्नुहोस्। यदि तपाईं प्रिस्क्रिप्सन ड्रग्सको साइड इफेक्टको बारेमा चिन्तित हुनुहुन्छ भने आफ्नो फार्मासिष्ट, चिकित्सक, वा विशेषज्ञसँग परामर्श गर्नुहोस्।
Toenail फg्गसको बारेमा जब एक डाक्टर हेर्न
यदि तपाईं लगातार toenail फg्गस अनुभव गर्दै हुनुहुन्छ वा दुखेको छ, तपाईं एक विशेषज्ञ भेट्न आवश्यक पर्न सक्छ। एक छाला विशेषज्ञ वा पोडियाट्रिष्टले तपाईंको लक्षणहरूको मूल्या assess्कन गर्न र प्रभावित toenail वा मांसको एक सानो नमूना पठाउन प्रयोगशालामा पठाउन सक्षम हुनेछ किनभने त्यहाँ विभिन्न प्रकारका फ fun्गी र खमीरहरू हुन्छन् जसमा onychomycosis हुन्छ। तपाईंको खुट्टाको फg्गसको विशिष्ट कारण थाहा पाउँदा तपाईंको अवस्थालाई उपचार गर्न कुन मार्ग लिने भनेर पहिचान गर्न मद्दत गर्न सक्छ।
नेल परिवर्तन पनि अन्तर्निहित स्थितिको कारणले हुन सक्छ, जस्तै सोरायसिस र मधुमेह , त्यसैले यदि तपाईको सर्त जारी रहन्छ वा बिग्रन्छ भने पेशेवर चिकित्सा सल्लाह लिन महत्वपूर्ण छ। मधुमेह बिरामीहरूमा छालाको ब्याक्टेरिया र फgal्गल संक्रमणको कारण प्रायः अस्पताल भर्ना हुन्छन्, र गम्भीर अवस्थाहरूमा, बिच्छेद हुन्छ। यदि तपाईं संक्रमणको लागि उच्च जोखिममा हुनुहुन्छ भने, तपाईंले घरेलु उपचार त्याग्नु पर्छ र पेशेवर चिकित्सा उपचार खोज्नु पर्छ।
Prilosec OTC खुराक, फारामहरू, र शक्तिहरू
बच्चाहरूसँग उनीहरूको मानसिक स्वास्थ्यको बारेमा कुरा गर्दै
के तपाइँलाई ह्या hang्गओभर मा पुग्न मद्दत गर्दछ
के कारणले तपाइँ ल्याक्टोज असहिष्णु बन्न सक्नुहुन्छ
कसरी छिटो घाँटी दुख्ने सफा गर्ने
130 को एक आराम मुटुको दर खराब छ?
टाइप2मधुमेह को लागी रक्त ग्लुकोज दायरा
के नकारात्मक ओ रगत को बारे मा विशेष छ